प्रचण्डले नै लोकमानलाई विदेश पठाएका हुन्ः एमाले सांसद सुनुवार - Pahilo News
प्रचण्डले नै लोकमानलाई विदेश पठाएका हुन्ः एमाले सांसद सुनुवार
नेकपा (एमाले) का युवा नेता तथा सांसद यज्ञराज सुनुवारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई राज्यले भत्ता खुवाएर विदेश भ्रमणमा पठाएको आरोप लगाएका छन् । सुनुवारले पहिलो न्युज डटकमसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । सोही सन्दर्भमा सांसद सुनुवारसँग गरिएको कुराकानीः
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले सर्वोच्च अदालतको तामेली नबुझेको विषयलाई लिएर अहिले निकै चर्चा भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कुनै पनि व्यक्ति संविधान र कानुन भन्दामाथि छैन । जहाँसम्म लोकमानसिंह कार्कीको सन्दर्भको कुरा छ, सर्वोच्च अदालतले पठाएका कर्मचारी लोकमानको घरमा गएर तामेलीको सूचना टाँस गर्न सक्दैनन् । त्यो दृश्य राज्यले टुलुटुलु हेरिरहन्छ भने त्यो भन्दा लज्जाको विषय अरु के हुन सक्छ ? सरकार कस्ता व्यक्तिलाई कानुन लगाउँछ ? सरकारको रवैया कस्तो छ ? भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो यो । ठूलालाई चैन र सानालाई मात्र ऐन भयो कि भन्ने आशंका अहिले आम नेपाली जनतामा उब्जिन पुगेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । त्यसैले लोकमान प्रकरणका बारे सबैभन्दा पहिला सरकारले जवाफ दिनुपर्छ, के ठूलालाई चैन, सानालाई मात्र ऐन गर्ने नीति सरकारको हो ?
अहिले लोकमानसिंह राज्यको भत्ता खाएर विदेशको सयरमा छन् । यहाँ उनको घरमा तामेली टाँस गर्न गएका सर्वोच्चका कर्मचारीलाई गुण्डागर्दी शैलीमा लखेट्ने काम हुन्छ । यो भन्दा लज्जास्पद विषय अरु के हुन सक्ला ? यो सरकारको लाचारीपनको पराकाष्टा हो । अर्को कुरा संवैधानिक पदमा बसेको त्यसको प्रमुखले हुलहुज्जत गर्न उद्यत गराउनु राज्यकै लागि दुर्भाग्य हो ।
तपाईँ व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । अब यो विषयमा त संसदमा पनि जोडदार रुपमा कुरा उठ्ला नि ?
उठ्नु पर्छ मात्र होइन, नउठी हुँदैन अब । कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन । मैले पटक–पटक संसदमा यही कुरा उठाउँदै आएको छु । त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने आँट सरकारसँग छ कि छैन भन्ने हामी पनि हेरिरहेका छौँ । लोकमान प्रकरणलाई दल विशेष भनेर हेर्नु हुँदैन । ठूला दलका शीर्ष नेताहरु पनि यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । एउटा व्यक्तिले राज्य र कानुनलाई चुनौती दिइरहँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरा उचित होइन । सर्वोच्च जस्तो गरिमामय संस्थाले गरेको कुरालाई अटेर गर्ने व्यक्तिबारे दलका शीर्ष नेताहरु मौन बस्नु हितकर कुरा होइन । यसले भविष्यमा अराजकता निम्त्याउने खतरा हुन्छ । एमाले यसमा गम्भीर छ । अन्य दल पनि गम्भीर हुनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति विश्वास राख्ने सबै दल गम्भीर हुनुपर्छ ।
लोकमान प्रकरणमा सरकार मौन बस्यो भने एमालेको भूमिका के हुन्छ ?
हामीले पार्टीको नेतृत्व तहमा पनि यो विषयमा गम्भीर ढंगले कुराकानी गरेका छौँ । जनताले ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने आरोप लगाउन अवस्था आउन नदिन एमाले तयार छ ।
लोकमान र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच नै केही तालमेल छ भन्ने पनि चर्चा छ नि ?
मैले यो कुरा सम्मानित व्यवस्थापिका संसदमा पनि उठाएको छु । माओवादीले लडाकुका नाममा गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा छानविन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, लोकमानसिंह र प्रचण्ड बसेपछि प्रचण्डले पार्टीको बैठकै अब लडाकुका नाममा भएको भ्रष्टाचारको विषय उठ्दैन भन्नुभएको थियो । यसले पनि हामीलाई उहाँहरुप्रति बढी आशंका उत्पन्न भएको छ । त्यसपछिका दिनमा आएका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने पनि निकै शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ । उहाँहरुबीच भएको यो शृंखलाबद्ध षड्यन्त्र त होइन ? भन्ने आशंका पनि उब्जिएका छन् । कानुनी राज्यमा यी हर्कतहरु अशोभनीय हुन् ।
कानुनले लोकमानलाई खोज्ने, लोकमान राज्यको भत्ता खाएर विदेश सयर गर्ने, यो संयोगमा कतै सरकारको पनि हात छ कि ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारको परिवर्तनपछि जेजस्ता हर्कत भएका छन्, ती सन्देहका घेरामा छन् । सरकार प्रमुखका गतिविधिले यही कुरा पुष्टि गरेको छ । यो सन्देश लोकमान प्रकरणसँग पनि जोडिएको छ कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । लोकमानले आँटका साथ आफ्नो घरमा तामेलीको सूचना टाँस गर्न नदिनु र उनी विदेश सयरमा राज्यको भत्ता खाएर लामो समय बस्नुका पछाडि शृंखलाबद्ध र योजनाबद्ध तयारी हो भन्ने लागेको छ ।